MUHIIMADA CAAFIMAAD EE BIYAHA Q2aad :
Biyaha waxaad ug baahantahay si aad ugu noolaato lakiin sidee?
Ma ogtahay in jirkaagu ka koobanyahay 60% biyo? Muhiimada biyaha waxaa dareemi kartaa markii indhahaagu, sankaagu iyo afkaaga qalayl aad ka dareentid Kaas oo jirkaagu u isticmaalo dhamaan xubnaha iyo unugyada jirka si lamid uu dheeli tiro shaqooyinka kala duwan ee jirka, maadaam jirkaagu lumiyo biyaha sida dhididka, neefsiga, dheebshiidka iwm waxaad u baahan tahay inaad cabto biyo si joogto ah. Hadaba halkaan hoose kaga bogo qodobo gaagaaban oo ku saabsan muhiimada biyaha
1-Biyuhu waxay ka caawiyaan jirkaaga qashin-saarka
Markaad biyaha cabto waxay ka qayb qaataa saarista qashinka sida dhididka, kaadida, saxarada taas oo ay mudnaanteeda leeyihiin xubnaha kelyaha iyo beerka iyo mendhicirada jirkaagu.
Sidoo kale biyo badan oo la cabaa waxay ka hortagtaa calool fadhiga iyo saxaro yarida
2-Biyuhu waxay ilaaliyaan dabiiciyada qoyaan ee jirkaaga
Ma u fiirstay markaan samayso jimicsi ama aad dhidido ama aad xanuun darii matag iyo shuban kugu dhoco dhamaan xaaldahaan oo dhan jirkaagu biyo aad u badan ayuu luminayaa taas oo bedelka jirku u baahan yahay in dib loogusoo celiyo biyihii ka lumay si aad taas u suuro gelisidna waxaa lagaaga baahanayahay inaad badsato biyo cabka, inaad isticmaasho casiir/sharaab badan
3-Biyuhu waxay dheeli tiraan heer kulka jirkaaga
La qabsiga jirka ee cimilada kala duwan waxaay weyn ka qaata biyaha, tusaale cimilada kulul dhididka uu jirku soo saaro ayaa qaboojiya qofka isuna dheeli tiran xaraarada/heer kulka jirka, lakiin ogow hadii aad u dhididay waa inaad cabtaa biyo badan si aad u dheeli tirtid dabiiciyada qoyaan ee jirkaaga
4-waxay xoojiyaan awooda jirku soo saaro
Biyo badan oo aad cabto kahor intaadan bilaabin jimicsiga, orodka, shaqooyinka adag waxay ka caawinayaan jirkaaga inuu soo saaro awood iyo xoog badan islamarkaana joogteeyso shaqadii ama jimicsigii
5-Biyuhu waxay ka hortagaan xanuunada
Biyo kugu filan oo aad cabto waxay ka caawiyaan jirkaaga xanuunada sida ku waan
Xanuunada kaadi mareenka
Xanuunada hurda yarida
Si lamida biyuhu waxay ka caawiyaan jirka inuu helo vitamiino, macdanta jirka iyo nafaqo dheeriya kuwaas oo dhamaan muhiim u ah caafimaadka taamka ah ee qofka
Tags: biyaha, caafimaad, water importance
Previous PostDHIIG KARKA–HYPERTENTION.